Tsy takona afenina ny tsy fahombiazana. Manginy fotsiny ny tsy fahatanterahan`ny teny nomena. Tsy mahagaga raha nipoitra sy nahazo vahana ho azy tamin`ireny fidinana an-dalambe ireny satria tsy mahavaha olana ny fitondram-panjakana. Tsy mahalala afa-tsy ny fiarovan-toerana, fampiasana ny fahefam-panjakana ho amin`ny tombontsoan`ny manokana. Tsy mandeha amin`izay izy ny fomba fanaovana politika sy ny antoko politika HVM. Mampatanjaka azy ny fampiasana fahefam-panjakana, olom-panjakana, fitaovam-panjakana… Mifangaro voraka ny maha olom-panjakana sy ny maha olon`antoko. Any am-pitsidiham-paritany ara-panjakana, ohatra, manatevina ny asan`ny antoko. Porofo, efa nahazo fitondrana vao nitsangana, izany hoe tsy manana olom-boafidy fa olom-boavidy. Eo ihany koa ny fandikan-dalàna, fanosihosena ny rariny, fanitsakitsahana ny fahamarinana nataon`ny antoko HVM. Ny tsy fandriampahalemana, fidangan`ny vidim-piainana, fandrobana tany etsy sy eroa dia avadika ho politika hatrany rehefa tsy hita izay tena vahaolana. Tsy mahagaga, antomotra ny fifidianana ka atao avokoa izay hahatsara endrika ny tena. Io politika seho ivelany io ve no fahombiazana ? Raha ampiharina ny lalàna ary tsy mitanila ny mpiasam-panjakana sy tsy tratry ny teritery ara-politika, dia hiboridana eo ny kandidan’ny HVM zatra nampiasa fahefam-panjakana rehefa mamory olona. Miakina amin`ny fandraisana andraikitra tena mahomby eo amin`ny manampahefana sy ambarataonga eto amin`ny tany sy ny fanjakana ny fifidianana madio.